China Mixed silicone teepu rụpụta na Factory | Jiashun
Silicone teepu:makwaara dị ka sandwich silica gel, bụ nke silica gel na iko fiber base ákwà site na elu okpomọkụ vulcanization, na acid na alkali eguzogide, na-eyi ndị na-eguzogide, elu na ala okpomọkụ na-eguzogide na corrosion eguzogide. A na-ekekwa akwa silica gel n'ime agwakọta silica gel na gel silica gel, nke na-ekewakwa n'akụkụ abụọ otu teepu silicone na akụkụ abụọ teepu silicone.
Na-agwakọta gel silica
Silicone roba bụ ụdị sịntetik sịlịkọn roba, nke a na-eme site na-agbakwunye raw silicone roba ka okpukpu abụọ mpịakọta inggwakọta igwe ma ọ bụ na-emechi kneading igwe, jiri nwayọọ na-agbakwunye silica, silicone mmanụ na ndị ọzọ nwekwara mgbe na-agbakwunye vulcanizing gị n'ụlọnga na kpo oku vulcanization (na vulcanizing gị n'ụlọnga bụ ahọrọ dika usoro achọrọ).
1. Kedu maka ihe nlele na ụgwọ?
Ihe nlele bụ n'efu, mana anyị ga-akwụ ụgwọ ụgwọ, mana ọ ga-akwụghachi gị ụgwọ ibu mgbe ị na-etinye iwu.
2. you bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa ma ọ bụ onye nrụpụta?
Anyị bụ ndị a ọkachamara emeputa ihe karịrị afọ 20
3.Gịnị banyere ịkwụ ụgwọ ahụ?
30% nkwụnye ego tupu oge eruo, nhazi 70%
4. Ogologo oge ole bụ oge ndu?
Nọmalị n'ime 15-20 ụbọchị mgbe ego natara.
5.Gịnị bụ Usoro Nkịtị anyị?
EXW, FOB, CIF, CNF, DDU, L / C emi.
6.Olee otu esi ejikwa mma gị?
Anyị nwere usoro zuru ezu na-ekwe nkwa ịdị mma: IQC FAS & Onyocha onwe maka
onye obula na emeputa oganihu → OQC. Ma dị n'okpuru:
1. Tupu mmepụta: iziga ihe eji emepụta tupu ịlele.
2. N'oge mmepụta: na-eziga ọtụtụ ihe eji emepụta ihe maka ịlele ọzọ.
3. Tupu Mbupu: ahịa 'ma ọ bụ ndị ọzọ' gara anyị factory ka
lelee ogo ozugbo ma ọ bụ nyocha ọ bụla nabatara!
4. Mgbe mbupu: ọ bụrụ na enwere nsogbu ọ bụla nke ngwaahịa anyị n'ihi mmejọ anyị,
anyị ga-aza ya n'ezie.
7. Kedụ ka esi ekwe nkwa mbupu n'oge m?
Anyị na-ebute ụzọ maka mbupụ iwu ma na-emelite ọganihu site na ntinye aka na nnyefe.
8. Ọ bụrụ na anyị enweghị mbupu mbupu na China, ị ga - emere anyị ya?
Ee, anyị nwere ike ịnye gị ezigbo ụgbọ mmiri iji hụ na ị nwere ike nweta ngwongwo n'oge n'oge ọnụahịa kacha mma
9. Kedụ ka anyị ga - esi nweta ndepụta ọnụahịa zuru ezu?
Biko nye anyị nkọwa zuru ezu banyere ngwaahịa a dịka Size (ogologo,
obosara, ọkpụrụkpụ), agba, kpọmkwem nkwakọ chọrọ na ịzụta ibu.
Nke gara aga: Pu ntekwasa akwa
Osote: Liquid silicone ntekwasa akwa